Shiinaha Hot dhalaali dhalaalka Warshadda Warshadda, CE, Soosaarayaasha - Tiknoolajiyadda Daahirinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Dhalasho kulul oo dhalaalaya xabagta
5 gal PUR dhalaalaya badan
Our 5 gal PUR bulk melter wuxuu qaataa saxnaanta dib u soo celinta dhabarka sare (soo celinta dareeraha dareeraha bar 1bar), kaas oo lagu qalabeeyay shaqeyn quful leh si looga fogaado dhaawaca qalabka ama amniga shaqaalaha ee ay sababaan khaladaadka hawlgalka. Naqshadeynta shaandhada ee mashiinka oo dhan waxay qaadataa shaandhaynta lakabyo badan oo culus. Waxay ka hortagi kartaa xabagta PUR inay dhacsan tahay oo ay xannibaadda keento. Sanadihii la soo dhaafay, badeecadaha ay soo saarto shirkadda si wanaagsan ayey u soo dhoweeyeen macaamiisha.
Our 55 gal PUR dhalaalaya badan wuxuu qaadaa kuleylka iyo dhalaalida tartiib tartiib ah: Saxanka kuleylka wuxuu ku yaalaa korka xabagta. Marka saxanka kululaynta la kululeeyo, kaliya lakabka sare ee foostada xabagta ayaa la xiriirta saxanka kuleylka wuxuuna gaarayaa barta dhalaalka oo dhalaalaya. Qaybta hoose ee foostada xabagta ahi ma dhalaasho xilligan. Si loo buuxiyo shuruuddeena ah in aan dhalaalno sida ugu badan ee aan ugu baahan nahay wax soo saar, xabagta ku jirta foostada caagga ah waxay leedahay nolol dheri dheer leh: nolosha dheriga waxay noqon kartaa ilaa 16 saacadood 150 ° C iyo 3 maalmood 90 ° C. Sanadihii la soo dhaafay, badeecadaha ay soo saarto shirkadda si wanaagsan ayey u soo dhoweeyeen macaamiisha.
Dhalo kulul dhalaaliya kululeeyaha 5 Liter
Mashiinkayaga kululeeya dhalaalka kulul 5 Liter wuxuu korsadaa tiknoolajiyada bamka piston-ka laga keeno oo leh xawaare jawaab degdeg ah iyo xasaasiyad. Waxay dhalaali kartaa xabagta 5 litir saacaddii, taas oo si wax ku ool ah u xaqiijin karta xasilloonida soo saarista xabagta ee mashiinka hawada sare iyo hoos u dhaca. Mashiinka kulul ee dhalaaliya kululeeyaha 5 Liter oo ay shirkaddu soo saartay sannado badan ayaa si wanaagsan loogu iibiyaa ASEAN iyo EU.
Dhalo kulul oo dhalaaliya kululee 10 Litre
Mashiinkayaga kululeeyaha kululeeyaha mashiinka qaabdhismeedka jirkiisa, rakibiddiisa iyo dayactirkiisuba waa mid fudud oo dhakhso leh. Lakabka laba-geesoodka ah ee teflon-ka ah ee haanta dhalaalaysa, iyo qaybta kululaynta ee fin-weynta qaabaysan, waxay hagaajineysaa waxtarka dhalaalka, waxay keydineysaa tamar, iyo wax ku ool ah waxay yareyneysaa kaarboonka. Mashiinka dhalaalka kulul ee dhalaaliya 10 Liter oo shirkaddu soo saartay sannado badan ayaa si wanaagsan loogu iibiyaa ASEAN iyo EU.
Dhalo kulul dhalaaliya kululeeyaha 30 Liter
Qalabka dhalaalaya kululeeyaha dhalaalaya wuxuu leeyahay aalad sifeyn sax ah si looga saaro wasakhda isla markaana looga hortago xirida biiyaha. Qaab dhismeedka fuselage qaabka iyo design albaab albaabka xakamaynta furan, rakibaadda iyo dayactirka waa mid fudud oo dhakhso leh; qalabka giraangirta hoose ee bini-aadamka ah, dhaqdhaqaaqa waa mid jilicsan, shaqada qufulku waa mid ammaan badan oo lagu kalsoonaan karo; naqshadeynta bini'aadamka ee qalliinka, qalliinku waa sahlan yahay. Mashiinka dhejiska kulul ee dhalaalaya ayaa si fiican loogu iibiyaa ASEAN, EU iyo meelo kale.
Dhalo kulul dhalaaliya kululeeyaha 50 Liter
Qalabka dhalaalaya kululeeyaha dhalaalaya wuxuu ku dhisan yahay wax ka badan ilaalinta heerkulka, ilaalinta heerkulka oo hooseeya, dib u dhigista mootada ayaa bilaabeysa ilaalinta, soo saarida wareegga furan ama ilaalinta qaladka kale, si loo hubiyo howlgalka aaminka ah ee qalabka. Lagu qalabeeyay qawaaniinta xawaaraha isbeddelka soo noqnoqda, waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa cabbirka wax soo saarka xabagta, saxitaanka mashiinka mashiinka qalabka (iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada farsamaynta shisheeye), isla markaana si wax ku ool ah loo hubiyo xasilloonida wax soo saarka xabagta.